Momba anay - SOTHIS (SUZHOU) ENVIRONMENT TECHNOLOGY CO., LTD
Niorina tamin'ny 1997, Sothis (Suzhou) Environment Technology Co;Ltd dia manolotra tsipika feno amin'ny fitaovana fanadiovana, fifampidinihana ary vahaolana ho an'ny indostrian'ny indostria sy ny fampiharana.Mizara telo ireo vokatra ireo ao anatin'izany ny fitaovana fitiliana, fitaovana ary mpanandrana sivana.Ny singa fototra dia ny counter particle / air sampler / dabilio madio / pass box / air shower / efitrano fandanjana /.
Miaraka amin'ny traikefa mihoatra ny 30 taona amin'ny fanaraha-maso ny fandotoana, dia nanangana sampana R&D manokana izahay miaraka amin'ny tsipika famokarana 8.OEM sy ODM dia azo alaina.Raha ny momba ny fampandrosoana maharitra, dia nanangana fiaraha-miasa maharitra amin'ireo oniversite malaza ao an-toerana, ivon-toeram-pikarohana ary fikambanan'ny indostria izahay ary nanao fifanakalozam-pianarana tsy tapaka.Amin'izao fotoana izao, Sothi dia mitazona fifanakalozana amin'ireo andrim-pikarohana vahiny avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao.
Sothi dia tarihin'ny vondrona tanora sangany manana valiny haingana sy fahalalana matihanina mba hahafeno ny fepetra takian'ny mpanjifantsika.Ny entanay dia aondrana any Vietnam, Pakistan ary India sy ny sisa.Amin'izao fotoana izao, dia miarahaba antsika namana bebe kokoa hifandray aminay.
Mandrakizay ny fampanantenana
Miompana amin'ny mpanjifa: manangana fiaraha-miasa amin'ny mpanjifa sy mpamatsy mba hanomezana fahafaham-po ny filan'ny mpanjifa, mihoatra ny fanantenan'ny mpanjifa, ary manavao tsy tapaka ny vokatra sy serivisy misy tombony amin'ny fifaninanana.
Miompana amin'ny kalitao: ny kalitaon'ny vokatra sy ny serivisy no fototry ny fahaveloman'ny orinasa, tokony hataontsika loha laharana foana ny kalitao.
Miompana amin'ny vokatra: mifantoka amin'ny vokatra izahay, mametraka tanjona mazava ary mandrindra amin'ny drafitra stratejika amin'ny antsipiriany mba hahazoana vokatra farany amin'ny fanatanterahana tsy misy kilema.
Miompana amin'ny mpiasa: ny fandrosoan'ny mpiasa no loharanon'ny fivoaran'ny orinasa, tompon'andraikitra amin'ny fitomboan'ny mpiasa, ary mandeha mialoha miaraka amin'ny mpiasa.
Miompana amin'ny andrim-panjakana: Manaja ny rafitry ny orinasa izahay ary manara-penitra ny fanatanterahana ny asa amin'ny ambaratonga rehetra
Ny vokatray dia ampiasaina betsaka amin'ny laboratoara, efitrano madio, orinasa fanafody, hopitaly, sekoly, fitaovana elektronika, semiconductor, sakafo sy zava-pisotro sns.
Ozininay sy Efitrano Fampisehoana
Sothis (Suzhou) Environment Technology Co.Ltd dia manana traikefa matihanina mihoatra ny 30 taona amin'ny fitaovana efi-trano madio, miaraka amin'ny mpiasa 200, teknisiana zokiolona maherin'ny 20, atrikasa 10000 metatra toradroa, fanamarinana ISO, adiny iray tonga any amin'ny seranan-tsambo Shanghai, izany no ataontsika. kalitao avo lenta sy tolotra mifaninana ho an'ny mpanjifa sarobidy manerantany.
Laminar fikorianan'ny Hood, rivotra fandroana, mandalo boaty, biolojika fiarovana kabinetra, fume hood, lanja trano heva, , Particle counter, rivotra sampler, setroka mpamokatra, aerosol mpamokatra, valin-drihana mitsangana laminar mikoriana Hood, rivotra mikoriana fisamborana Hood / balometer sy ny sisa.
Ny vokatray dia amidy indrindra any Azia Atsimo Atsinanana, Afovoany Atsinanana, Amerika Atsimo, Afrika, sns., ary mitady mpaninjara fiaraha-miasa maharitra kokoa any amin'ny firenena maro izahay mba hampiroborobo ny vokatray., ary mitombo isan-taona ny varotra.